No end in sight for Zim's woes - DailyNews Live
30 June 2015 10:05AM • 1 comment
Imi ve press mavakuda kuti tirove munhu zvakare. Isu tinoda runyararo munyika kwete dongatonga. Musafurire Tsvangirai nekuti anogona kuzvamburwa neshamu yemupuranga nekuda kuyedza zvisiri pamutemo wenyika. Akapiwa masimba nemapurisa hapana dambudziko asi akaita zvisina masimba anogadziriswa zvakanakawo. Ndiyo yambiro yangu kuna Tsvangirai.
Chimbwido Warvert - 2 July 2015